သင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်သက်ရောက်မှုများလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းကိုရေတွက်မည်လား | Martech Zone
မနေ့ကငါဘယ်လိုရေးသားခဲ့သည် MySQL ကို သုံး၍ သင်၏ Word Count ကိုတွက်ချက်ပါ WordPress ရှိသင့်ဘလော့ဂ်တင်ပို့ချက်များတွင် ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များသည်မည်မျှကြာသည်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိသိရန်ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချင်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာရလဒ်တွေပါ!
Word Count vs. စာမျက်နှာလည်ပတ်မှု
ရလဒ်? နေ့စဉ်ခြောက်လတိုင်ပို့စ်များ (တစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့လျှင်ပို့စ်ပေါင်းမြောက်များစွာ) နှင့်ဆက်စပ်သောစကားလုံးများသည်နေ့တိုင်းအတွက်ရေတွက်။ စကားလုံးအရေအတွက်သည်ကွဲပြားမှုမရှိကြောင်းလုံးဝဖော်ပြနိုင်သည်။ အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး ခြားနားချက်စေခဲ့ရိုးရှင်းစွာပို့စ်များ၏အရည်အသွေးဖြစ်ခဲ့သည်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါတိုတိုတုတ်တုတ်ရေးသားချက်များရှိခဲ့စဉ်သို့မဟုတ်ရှည်လျားသောရေးသားချက်များရှိခဲ့ရင်ငါ့ဘလော့ဂ်ကမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး
ဘလော့ဂ်ရဲ့သော့ချက်ကကြီးကျယ်တဲ့တင်ပို့ချက်တွေမဟုတ်ပဲ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်ရေးသားခြင်း! သော့ချက်စာလုံးသိပ်သည်းဆသင့်စာမျက်နှာကိုမှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းနိုင်သည်သို့သော်အခြား site များမှ backlink များသည်သင်၏ဘလော့ဂ်အားရလဒ်စာမျက်နှာများထိပ်သို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ ငါမဆိုနေ့ကတစ် ဦး perfectlyုံသော့ချက်စာလုံး - riddled post ကိုမှ backlink ကုန်သွယ်မယ်လို့!
သင်၏စတိုင်သည် (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) ရှည်လျားသောပုံစံဖြစ်ခဲ့လျှင်စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါဆိုင်ရာအမှားများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားနှစ်သက်သောစာဖတ်သူအချို့ကိုသင်ဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ my ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သူ ဦး ရေသည်တသမတ်တည်းတိုး။ ကြီးထွားလျက်ရှိသည်။
ငါရှာဖွေတွေ့ရှိသော search engine အသွားအလာသည် (၂၀% ခန့်) အတော်လေးကျဆင်းသွားကြောင်းကျွန်ုပ်သတိပြုမိရန်အရေးကြီးသည် ငါ့ဒိုမိန်းနာမည်ပြောင်းလိုက်တယ် နှင့် Google ထံမှ reindexing စောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။
အဆုံးဆီသို့ ဦး တည်ကွဲလွဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လူကြိုက်များမှုကြောင့်ဖြစ်သည် Starbucks တန်ဖိုး post - ဤဘလော့ဂ်များတွင်လူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှည်ဆုံးလည်းဖြစ်သည်။
Tags: b2c ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စီးပွားရေးရလဒ်များဖောက်သည်တိုင်ကြားချက်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုစီးပွားရေးအတွက် Facebookfacebook စျေးကွက်မဟာဗျူဟာFAQsရလဒ်တိုးတက်အောင်သစ္စာရှိခြင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများmultidomainမြဝတီကမ်းလွန်
သြဂုတ် 28, 2008 မှာ 4: 04 AM
Great Article, မင်းကို ၁၀၀% သဘောတူပါ။ ငါသေးငယ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအချိန်လည်းမရှိယုံကြည်ပါတယ်, ဤအရပ်မှငါပိုသေးပို့စ်များသို့မဟုတ်ကျည်ဆံအချက်များရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။
သြဂုတ် 29, 2008 မှာ 7: 30 AM